Misoratra amin-dRandrianasolo Jean Nicolas ny fiara, Solombavambahoaka voafidy tao Betroka anisan’ireo mpanohana mafana fo ny fitondrana Rajaonarimampianina. Nanantena fanomezana avy amin’ny Fanjakana hahafahana mampiditra maimaimpoana ilay fiara, tsy mandoa haba ve ny tompony sa inona no nampihitsoka azy tao amin’ny ladoany ? 4 tapitrisa Ariary no vidy farany ambany nanombanan’ny ladoany ilay fiara. Lavanty moa no natao, ka izay mpifaninana nanao tolotra ambony indrindra no nahazo azy. Tafakatra 92 tapitrisa Ariary ny vidiny. Malagasy avy eto Antananarivo no nahazo azy, tsy nambara kosa ny anarany.